Vamwe zvinokosha gauges kana Marwadzo zvisipo. Ndoita sei ?
Kana yakawanda okunatsiridza zvakagadziridzwa kupinda «Gauge» forodha, rinogara kuti chikamu chawo mafaira zvisipo. Pakadaro, kana ane wedzera-pane zvinodiwa zvichemo mafaira, hazvizovi kukwanisa kuratidza gauges kupinda pemapuranga. Kazhinji mushonga kunoratidzwa reinstalling FSX. Kuitira kudzivisa reinstalling FSX, unogona kukopa Gauge pora, Ndiro duku chirongwa akasikwa Rikoooo kuti achadzorera yepakutanga faira ose kubva «Gauges» uye «Zvinozovapo» folders.
Update 13 / 02 / 2014: A Prepar3d shanduro zvaakasikwa.